रबिका फ्यानहरु सँग माफी माग्दै किरणले लेखे मन छुने सन्देश’:: Mero Desh
किरणले लेखे रबिलाइ मनछुने सन्देश “रबी अनी किरण” रबी को अर्थ घाम , सूर्य उदाऊछ त किरण छर्नलाई! र सूर्यको किरणले संसारलाई न्यानोपन दिदछ! यसर्थमा रबी-किरण एक- अर्काको परीपूरक हुन! वास्तबमै घामको अस्तित्व किरणले अनी किरणको अस्तित्व घामले बोकेका हुनछन! ।भाग्यले भनौ या हाम्रो दु’र्भाग्य,द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ मा
मेरो प्रिय साथी रभि अनी म, हामी दुबैजना एउटै समूह टिम प्रमोदमा पुग्यौ ! शो को फर्मट नै यस्तै छ की आफ़्नै टिमका ट्यालेन्टहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो टिम बाट एऊटा मात्र ट्यालेन्ट फाइनल मा बाँकी अरु टिम का ३ ट्यालेन्टहरुसंग बिजेता बन्नको लागी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुनछ!
साथी रभि आफैमा एकदमै उत्कृष्ट गायक/कलाकार हो, र म आफै पनि उस्को ठूलो प्रसंसक हुँ! हामीले एउटै टिम मा भएर एक-अर्कालाई माया, साथ, प्रेरणा, हौशला,प्रोत्साहन गर्दै टप ८ सम्म संगै आउन सफल भयौं तर पनी कहिल्यै पनि एक-अर्काको प्रतिस्पर्धी हो भन्ने महसूस भएन!
झनै हाम्रो मित्रता /नाता बलियो अनी सुमधुर हुदै गयो । अझ यहाँ सम्म आइपुग्दा त रभि र म एउटै बेड मा सुत्ने, एउटै प्लेट मा खाने, एक अर्काको सुख/दुःखका कुराहरू सेयर गर्ने, एक हिसाबले एउटै परिवारको दाजु-भाई जस्ता भएका छौं हामी! सायद हामी दुबैसँग आफ्नो देश आफु सँग नहुनुको पिडा,
आफ्नो देशप्रतिको माया, भावना साथै अन्य धेरै कुराहरु मिल्ने भएको भएरपनी होला हाम्रो सम्बन्ध यति गाढा अनी सुमधुर बनीरहेको छ! पक्कै पनी तिमी र हामी एउटै आमाको दू’ध छुटेको सन्तान थियौं र हौं । भौगोलिक रूपले विश्व को बिभिन्न ठाऊहरुमा रहेता पनी मनमा देशको माया र शिरमाथी नेपाल बोकेर बस्ने
हामी आज टिभिओएन को प्लाटफम बाट हामी छुटेको परिवार फेरी भेट भएका छौं! रभि र मैले मात्र हैन, हामी सबै ट्यालेन्ट हरूले हजुरहरु सम्पूर्ण हाम्रा भगवानरूपी दर्शक श्रोताहरुको माया पाएका छौं! यो भन्दा ठुलो उपलब्धि अरु के हुन सक्छ र हाम्रो लागी! शो को फर्मेट को कारण रभी शो बाट बाहिरिनु पर्यो!
म आफु अगाडी जानुको खुसी भन्दा धेरै दुख रभी आउट हुदा लाग्यो! उनी आउट नहनु पर्थ्यो तर त्यस्तो भयो! मलाई थाहा छ यो कुराले सम्पूर्ण रभि लाई माया गर्नुहुने आदरणीय श्रोता – दर्शकहरूको मन दुखेको छ र म हजुर हरु सबैसंग माफी पनि माग्न चाहन्छु र मलाई थाहा छ की उनी अस्ताएका होईनन, रभि सधै उदाई नै रहनछन र संसारलाई किरण छरिइरहने छन।
यसर्थमा यिई दुबै एक-अर्कामा बाँची रहनछन! साथी अब तीम्रो र मेरो सपना एउटै भएको छ! तिम्रो माया, साथ र सम्पूर्ण महानुभावहरूको आशीर्वाद लिएर यो हाम्रो सपना लाई अब म पूरा गर्ने प्रण गर्दछु! अब तिमीले मेरो आँखा बाट हाम्रो सपना देख्ने छौ! मलाई थाहा छ तिम्रो आगामी संगितिक यात्रा उज्जवल,
सफल, प्रगतिशील हुनेछ ! तीम्रो हरेक सफलता , उतार – चढाव , सुख-दुःखहरुमा म तिम्रो साथमा हुनेछु! हामी संगै मिलेर सांगितीक यात्रामा संघर्ष गरौंला , तिमीलाइ सफल संगितिक भविष्यको शुभकामना साथी! असिमित माया”!!